January 24, 2021 - Babal Khabar
Sunday, April 11www.babalkhabar.com : For your kind information
Jan242021 by बबाल खबरNo Comments
बिहेको खबरले छक्क सुनिता, जान्नुहोस कारण
गायिका सुनिता दुलालको बिवाहको खबर एक कान, दुई कान, मैदान भयो । गएको भदौंमा उनले बिवाह गर्ने चर्चासँगै कोसँग र कहाँ बिवाह गर्ने भन्ने कुरा समेत फैलिएको थियो । त्यो खबर फैलिएसँगै सुनितालाई थुप्रै शुभचिन्तकले बधाई समेत दिए । धेरैले अनुमान समेत गरेका थिए, उनको विवाह भैसक्यो । तर, यो अफ्वाह मात्र रहेको सुनिताले बताएकी छिन ।आफ्नो बिवाहको खबरले आफै आश्चर्यमा परेको सुनिताले बताइन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा सुनिताले भनिन्–‘त्यो हल्लामात्रै थियो । त्यो दिन मेरो भाइको बिहे हुँदै थियो तर मेरो भनेर हल्ला भएछ ।’ सुनिताले तत्काल बिहेको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आफू प्रेममा पनि नरहेको अनलाइनखबरसँग बताइन् । उनले भनिन्–‘म सिंगल छु । बिहेको साइत कहिले जुर्छ, थाहा छैन । तत्काल कुनै योजना पनि छैन ।’ उनले बिवाह योजना बनाएर हुने कुरा नभएको समेत बताईन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आफ्नै टिभिबाट आउने कार्यक्रमको तयारीको लागि रवि लामिछाने लागे प्रदेश १ तर्फ (भिडियो सहित)
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागेश्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने कि'शोरा वस्थामै कार्यक्रम चलाउँथे । दाजु हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालका समाचार वाचक हुनुले उनमा आवा’जको दुनियाँमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो । तर, उनी देशभित्र लामो समय बसेनन् । मिडियामा काम गरिसकेका उनी मिडियामै काम गर्नेगरी स्वदेश फर्किए । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने देखि जनता’को स'म’स्या उठाएर चर्चामा आए । चर्चासँग पटक पटक वि’वादमा आएका उनी हि’रा'सत सम्म पुगेर धरौ’टीमा रिहा भए । उनको आरोह र अवरो’हले भरिएको जीवन यस्तो छः रवि लामि’छानेले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा भृ’कुटी माध्यमिक विद्यालयबाट लिए । एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका उनी प्रतिभा शाली छात्रका रुपमा चिनिन्थे । विद्यालय जीवनमा सा’हित्य र कलामा समेत लागेका थिए । विद्यालय जीवनप’छि च्च अध्ययनको लागि रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भ:र्ना भएका थिए ।
यी चार युवतीसँग भूलेर पनि नगर्नुहोस् विवाह, हुन सक्छ जीवनभर प’छुतो
कसैको पनि विवाह जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण निर्णय हो। विवाह त्यस्तो व्यक्तिसँग गर्नु पर्छ जो सँग आफ्नो मन मिल्छ र खुसी भइन्छ। तर विवाह गर्दा यी युवतीको सवाहमा भने टाडै बसेको राम्रो मानिन्छ। किनकी यु युवतीसँग विवाह गर्दा तपाईको खुसी खोसिन सक्छ। हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले यी चार यीवतीसँग विवाह गर्दा विवाह जीवन खुसी नहुने देखाएको छ। ती युवतीका बारेमा जानिराखौँ प्रेम सम्ब'न्धमा रहेकी युवती कुनै पनि युवती प्रेम सम्ब'न्धमा छिन् भने ती युवतीसँग विवाह नगर्नुहोस् किनकी ती युवतीले तपाईलाई खुसी दिन सक्दिनन् र तपाई पनि ती युवतीसँग खुसी हुन सक्नुहुन्न। यो पनि सन्तान नभएर तना’वमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् शास्त्रका यी उपाय रबि लामिछानेद्वारा न्युज २४ छाडेको घोषणा, नजिकको ना'ता पर्ने युवती कुनै पनि नजिकको नाता गर्ने यु'वतीसँग पनि तपाई वि'वाह देखि टाडै रहदा राम्रो हुन्छ। ना ता सम्ब'
भुलेर पनि नगर्नुहोस् आइतबारको दिन यी काम, नत्र हुनेछ यस्तो
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कि मानिसहरूले तपाईंको जीवनभर आदर गरून् र पैसाको कमी कहिल्यै पनि न'आओस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने, आइतवार कुनै यस्ता कुनै विशेष काम गल्तीले पनि नगर्नुहोस्‘ जान्नुहोस् ती कुन चीजहरू हुन् जुन आइतवारमा गर्नु हुँदैन‘ इतवार सूर्यको पूजा गरिन्छ। भनिन्छ कि सूर्यको पूजा गरेर र सूर्यलाई पानी चढाएर, एक व्यक्तिको महिमा बढ्छ र भाग्य बलियो हुन्छ। जे होस्, हप्ताको सबै सात दिन सौर्य मण्डलमा कुै न कुनै ग्र'हसँग सम्बन्धित छन्। सबै ग्रहहरूले आफ्नो सही प्रभाव राख्नुपर्दछ र तिनीहरूको लागि काम गरिनु पर्दछ। त्यस्तै आइतवार सूर्यको पूजा गर्ने नियम छ। यस दिनमा सूर्य अन्य ग्रहहरूको भन्दा बढी उर्जा लिएका हुन्छन् । ज्योतिषी पंडित बिनोद मिश्रका अनुसार जन्म कुंडलीमा सूर्यको स्थिति ठीक हुनुपर्छ। जसको कारणले समाजमा व्यक्ति सम्मान प्राप्त गर्दछ। यससँग, उसको जीवनका कष्टहरू हटाइन्छ र ऊ सुखी जीवन
सन्तान नभएर तना’वमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् शास्त्रका यी उपाय
सबै आमा बुवालाई सन्तानको इच्छा हुन्छ नै। तर केही कारणले कुनै आमा बुवालाई सन्तान सुख प्राप्त हुँदैन। यस्ता आमा बुवाले निरास नभइ केही तरिका अपनाउनु पर्छ। जसबाट स'न्तान प्रा'प्तिको सम'स्या ह'ट्न सक्छ। जसको जन्म कुण्डलीमा राहु पाँचौं स्थानमा हुन्छ उनीहरुलाई सन्तान सुखमा सम'स्या हुन्छ। यो सम'स्याबाट छुट'का'रा पाउन मुख्य ढोकाको तलपट्टी चाँदीको पत्र बनाएर राख्नुस् त्यसबाट स'न्तान हुने संभावना रहन्छ। यदि धेरै उप'चार गर्दा पनि सन्ता'न भएनन् भने ४० दिनसम्म पाँच वटा मुला राति श्रीमतीको सिरानीमा राख्नुस्। र, ती मुलालाई भोलिपल्ट भगवान शिवको मन्दि'रमा चढाउनुस्। यो प्रक्रिया तीनदेखि चार पटक सम्म गर्नुस् तपाइँको सन्ता'न हुन्छन्। निस'न्तान दम्पत्तिलाई सुनौलो रङको कौडा पनि निकै उपयोगी हुन्छन्। यसकालागि आइतबार पाँच कौडालाई लिएर मन्त्र उच्चा'रण गर्नुस् र यी कौडीलाई पहेँलो रुपमा राखेर श्रीमतीको कम्मर
यी १० सपना देख्नुभयो भने हुनेछ ठुलो नोक्सान, जान्न्ुस कस्ता सपना देख्दा हुन्छ यस्तो
रामायण र महाभारत लगायतका विभिन्न धर्म ग्रन्थमा सपनाको अर्थबारे चर्चा गरिएको छ । सपनाले भविष्यमा हुने घ'टनाको सं'केत गर्ने विश्वास छ । केही सपनाले भविष्यमा सुखद संकेत गर्छन् भने कतिपय सपनाले अशु'भ संकेत पनि गर्छन् । स्वप्न शास्त्रका उल्लेख भए अनुसार यी १० सपना अशुभ घट'नाको संकेत गर्छनः १.यदि सपनामा जुवा तास खेलेको देख्नु भो भने यसले तपाइँको धन हा'नी हुने सं'केत गर्छ । २.कुचोको महत्व शास्त्रमा ठूलो छ । सफाइलाई लक्ष्मीको प्रतीक समेत मानिन्छ । सपनामा तपाइँले कुचो देख्नु भो भने पैसा नो'क्शानीको संकेत गर्छ । ३.सपनामा उ'ल्लु देखियो भने अ'शुभ मानिन्छ । उल्लुले जीवनमा सं'कट आउने संकेत दिन्छ । ४.सपनामा पाकेटमा'रेको देखियो भने यसले धन हा'नी हुने संकेत दिन्छ । फाटेको खल्ती देख्नु पनि नोकशा'नीको सं'केत हो । य ५.स्वप्न शास्त्रका अनुसार सपनामा मरुभूमिमा हिँडेको देखियो भने शत्रु लाग्ने
पानीबाट यसरी गाडी कुदाउँदै शिशिर भए सब चकित
पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने
म्यान्मारमा सैनिक दमन,एक्कै दिन ८२ प्रदर्शनकारी मारिए संसार नै चकित
गंगामायाका छोराका हत्या अभियुक्तहरू १२ जना लाई चितवन अदालतले किन दियो सफाइ हेर्नुहोस् ।
राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको मानपदवी पदकमा चुच्चे नक्सा नसमेटिएको भन्दै अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
प्रचण्ड पत्नी सीताको भावुक बनाउने तस्वीर कसरी भयो यस्तो?
शिवपुरी–नागर्जुन निकुञ्जमा भीषण डढेलो , निभाउन हेलिकप्टरबाट पानी
लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सरकारको यस्तो धारणा सार्वजनिक
मेलम्चीको पानी कसरी भयो?तीन सय भन्दा बढी ठाउँमा लिकेज
पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिनु लाजमर्दो कुरो : माधवकुमार नेपाल
बिस्केट जात्राको रथ तान्दा मध्यराती भयो यस्तो घटना १९ जना घाइते
वैशाख १ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न मानपदवी प्राप्त गर्नेमध्ये ४५२ जनालाई विभूषित गर्ने नामावली सहित हेर्नुहोस् ।
म्यानमारका नागरिकको जीवन झन-झन यसरी पिडादाइक बन्दै
सुकुम्बासी हटाएर ४० करोड लागतमा यसरी सपिङ कम्प्लेक्स बनाउदै
बागलुङको सिर्जना फर्निचर उद्योगमा लाग्यो यसरी आगलागी
समयमै नागरिकले यस्तो नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने : प्रधानमन्त्री ओलि
किन दिइयो ? तीन सैनिक उच्च अधिकारीलाई मृत्युदण्ड हेर्नुहोस् ।
कोभिड–१९ संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य मापदण्डमा यस्तो कडाइ
उनी नै प्रधानमन्त्री बनुन्, २० भोटले हारेको अध्यक्ष पनि चाहिंदैन : माधवकुमार नेपाल